1 Tantara 23 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 23
Ny nanisana ny Levita sy ny rahalahin'izy ireo.
1Nony efa tratra antitra sy feno andro Davida, dia Salomona zanany no natsangana ho mpanjaka tamin'Israely.
2Novoriny avokoa ny lehibe tamin'Israely mbamin'ny mpisorona sy ny Levita, 3dia nisaina ny Levita hatramin'ny telopolo taona no miakatra, ka valo arivo sy telo alina no isan'ny vatan-dehilahy tsirairay avy. 4Ary hoy Davida: Aoka ny efatra arivo sy roa alina amin'izy ireo, hiadidy ny raharaha ao an-tranon'ny Tompo, ny enina arivo ho mpanoratra sy mpitsara, 5ny efatra arivo ho mpiandry varavarana, ary ny efatra arivo ho mpidera an'ny Tompo amin'ny zava-maneno nataoko hankalazana azy.
6Nozarain'i Davida ho antokony araka ny zanak'i Levì izy ireo dia: Gerona, Kaata, Merarì.
7Ny Gersonita, dia Leedàna, sy Semeia. 8Zanakalahin'i Leedàna: Jahiela filohany, Zetama sy Joela, telo izy. 9Zanakalahin'i Semeia: Salomita, Hoziela ary Aràna, telo izy. Ireo no loham-pianakaviana, avy amin'i Leedàna. 10Zanakalahin'i Semeia: Leheta, Zizà, Jaosa ary Barià, izy efatra ireo no zanakalahin'i Semeia. 11Leheta no lohany, Zizà no faharoa, Jaosa sy Barià vitsy zanaka lahy, ka nisaina ho antokony iray araka ny fianakaviany.
12Zanakalahin'i Kaata: Amrama, Isaara, Hebrona, ary Oziela, efatra izy. 13Zanakalahin'i Amrama: Aarona sy Moizy. Ary Aarona natokana hohamasinina indrindra, izy mbamin'ny taranany mandrakizay, mba hanolotra zava-manitra hanetona eo anatrehan'ny Tompo, hanao ny fanompoany ary hitso-drano ny olona amin'ny anarany mandrakizay. 14Ny amin'i Moizy, mpanompon'Andriamanitra kosa, dia nisaina anatin'ny fokon'i Levì ihany ny zanany. 15Zanakalahin'i Moizy: Gersoma sy Eleazara. 16Zanakalahin'i Gersoma: Soboela filohany. 17Ny zanakalahin'i Eliezera, dia Rohobià, filohany. Tsy nanan-janakalahy hafa Eliezera, nefa maro dia maro ny zanakalahin-dRohobià. 18Zanakalahin'Isaara: Salomita filohany. 19Zanakalahin'i Hebrona: Jeriao filohany, Amariasa faharoa, Jahaziela fahatelo, ary Jekmaama fahefatra. 20Zanakalahin'i Oziela: Mikà filohany, Jesià faharoa.
21Zanakalahin'i Merarì: Moholì sy Mosì. 22Zanakalahin'i Moholì: Eleazara sy Kisa. Maty tsy nitera-dahy Eleazara, fa vavy ihany, ary nalain'ny zanak'i Kisa, rahalahiny, ho vady ireo. 23Zanakalahin'i Mosì: Moholì, Edera ary Jerimota, telo lahy izy. 24Ireo no zanakalahin'i Levì araka ny fianakaviany, ny loham-pianakaviana, araka ny nanisana azy, voaisa isan'olona, voatonona anarana, izay nanao fanompoana tao an-tranon'ny Tompo hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra. 25Fa hoy Davida: Iaveh Andriamanitr'Israely efa nanome fitsaharana ny vahoakany, ka honina mandrakizay eto Jerosalema. 26Ary ny Levita efa tsy hitondra ny Fonenana mbamin'ny fanaka rehetra, fanaovana ny fanompoana momba azy intsony. 27Koa araka ny didy farany avy amin'i Davida no nanisana ny taranak'i Levì, hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra. 28Fa ny raharahany dia ny manolo-tena hoentin'ny taranak'i Aarona, amin'ny fanompoana ao an-tranon'ny Tompo, ny amin'ny momba ny kianja aman'efitrano, ny fanadiovana ny zavatra masina, ary ny raharaha momba ny fanompoana ao an-tranon'ny Tompo; 29ny amin'ny mofo alahatra, sy lafarina tsara indrindra hatao fanatitra, ny mofo manify tsy misy lalivay, ny endasina amin'ny lapoaly sy ny zavatra voaharo, ny zavatra fandanja amam-pamatra rehetra. 30Anjarany ny tonga miseho isa-marain-tsy hariva hankalaza sy hidera an'ny Tompo, 31sy hanatitra ny sorona dorana rehetra amin'ny Tompo, amin'ny andro sabata na amin'ny voalohan'ny volana, na amin'ny fety, araka ny isany voadidy hatao mandrakariva eo anatrehan'ny Tompo. 32Azy ireo ny mikarakara ny fitandremana ny trano lay fihaonana, ny fitandremana ny zavatra masina, ny fitandremana ireo taranak'i Aarona, rahalahiny, amin'ny momba ny fanompoana ao an-tranon'ny Tompo. >